होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुलाई – डा. रवीन्द्र पाण्डेको अनुरोध – Digital Khabar
१९ बैशाख, काठमाडौं । कोरोन सकंमण दिनदिनै बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने,आम नागरिकहरु सतर्कता अपनाउनपर्नेमा डाक्टरहरु तथा स्वास्थ्य संग सम्वन्धित विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको लक्षणहरु देखीएमा वा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे फेसबुक मार्फत आम सर्वसाधारणहरुमा अनुरोध गरेका छन् ।
उनले होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका संक्रमितहरुलाई निम्न सुझाव दिएका छन् ।
१६. गाह्रो भएमा १०२ नम्बरमा फोन गरेर एम्बुलेन्स मगाउनुहोला, उपचारको लागि कोभिड हटलाइन ११३३,९८५१२५५४३८ र ९८५१२५५८३७ मा फोन गरेर उपचारको जानकारी लिनुहोला | लगायतका सल्लाह दिनुभएको छ ।
बेड र अक्सिजन अभावलाई यसरी ब्यबस्थित गरौँ – डा. रवीन्द्र पाण्डेको सुझाव – Digital Khabar 1 month ago